Ntuli aka UNWTO ka gburu onye ọ bụla na-asọpụrụ na UN System
Location: Mbido » Ịdee » Akụkọ Ọchịchị » Ntuli aka UNWTO ka gburu onye ọ bụla na-asọpụrụ na UN System
UNWTO Executive Council gbatịrị oge maka odeakwụkwọ ukwu UNWTO Zurab Zurab Pololikashvil ruo na ngwụsị nke 2025. Nke a bụ ụbọchị nwute, ọ bụghị nyocha nke ntozu ma ọ bụ mmemme nke Mr. Zurab.
Taa, 113th Executive Council of the World Tourism Organisation (UNWTO) hoputara onye ode akwukwo ukwu ya Zurab Pololikashvili ugbua nwere oke oke nke 76% megide naanị onye isi oche bụ Oriakụ Shaikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa si Bahrain.
Ntuli aka UNWTO a abụghị maka ihe ọma ma ọ bụ nke ọma, ọhụụ, ma ọ bụ ọrụ nke otu ụlọ ọrụ mmekọ UN na-eme njem nlegharị anya ụwa na-achọ idu. Ọ bụ banyere ịchọ ọdịmma onwe onye nanị nke otu onye ma merie na nhọpụta ahụ n'agbanyeghị agbanyeghị.
Iji gbakwunye mkparị na mmerụ ahụ n'ọnọdụ ọnọdụ na-ewe iwe ugbu a, na Madrid, ma Mịnịsta Ala Spain, Pedro Sánchez, na Onye isi ya bụ Felipe VI gosipụtara nkwado ha na UNWTO na ndị ndu ya. Minista Ofesi si Georgia kwadoro nri abalị nke abalị n'abalị ahụ tupu ntuli aka.
Ihe onye ọ bụla kwesiri ikwenye na: UNWTO Secretary General General Zurab Pololikashvili, onye bụbu onye nnọchi anya Georgia na Spain na Madrid bụ onye isi nke itinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na 2017 ma meziwanye karịa na 2020.
Na 2017, nkwenye ya dị ka odeakwụkwọ ukwu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ ga-aga n'ihu UNWTO General Assembly na Chengdu, China, site n'aka ndị isi ya bụ Dr. Walter Mzembi si Zimbabwe ma kwado Nwada Dho Young-shim si South Korea.
Ihe kpatara Dr. Mzembi ji kweta ịwepụ ihe ọ jụrụ bụ nkwa UNWTO kwere na ya ga-arụkwa usoro ọzọ maka usoro ntuli aka. Nke a kwadoro nke onye bụbu ode akwụkwọ ukwu mbụ, Dr. Taleb Rifai, na Zurab Pololikashvili na-abata. E kwere Dr. Mzembi nkwa iduga ụdị atụmatụ a.
Nke a mechara bụrụ nkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụgha ma mee ka Zurab kwenye na 2017.
-Rụgharị usoro ntuli aka ahụ arụpụtabeghị.
Kemgbe 2020, njem na njem nlegharị anya na-agabiga nsogbu kachasị njọ n'ihi COVID-19.
Zurab jisiri ike jiri nsogbu a mee ihe, na-agbakwunye ngwa ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị iji kwado ntuli aka ya.
Kedu otu UNWTO si emebi ọkpụkpọ ọ bụla nke United Nations maka ịme ntuli aka ziri ezi, bụ ajụjụ akwụkwọ a jụrụ na Septemba 13, 2020
Nke a bụ nchịkọta:
Zurab kpọrọ oku maka nzukọ anụ ahụ maka ndị otu Council Council nke 112 na obodo ya Georgia na Septemba 2020. Coronavirus mere ka o siere onye otu kansụl ike ịga.
Oge iji bulite ihe eji eme ihe na Georgia ekweghị ka ndị na-esonye na-asọmpi na-ebugharị ụbọchị maka nzukọ 113th Council na Jenụwarị 18-19 kama nke May. Ihe kpatara ya bụ iji nwee ihe omume dabara na FITUR, agbanyeghị, FITUR kagburu naanị ụbọchị ole na ole a.
Oge iji bulie ihe ndị a na-eme na Georgia ekweghị ka ndị otu wepụta ụzọ ọzọ mgbe ekwuputara na ndị ọhụụ ọhụrụ ga-edebanye aha ha iji sonyere Zurab n'ime izu 6. Nke a bụ ihe karịrị otu afọ tupu oge okwu onye ga-eme ya. Imirikiti mba ndị so na UNWTO jidere na mberede ma ọ bụ ọ nwere ike ha aghọtaghị. Okwu esemokwu na mba ndị otu nọ na COVID ọ bụghị na ndị na-aga ime ya.
Mmadu asaa debara aha na agbanyeghị, mana naanị otu onye si Bahrain kwere ka ịbanye. UNlọ ọrụ UNWTO n'okpuru Zurab jụrụ ngwa 6. Amabeghi ihe kpatara ya ma obu onye tinyere ya.
Naanị nwa akwukwo na-eme mkpọsa megide Zurab enweghị oge ọ bụla iji mee mkpọsa. Mgbochi njem n'ihi COVID mere mkpọsa agaghị ekwe omume.
Zurab jiri ego UNWTO gaa ụwa mana ọ bụ naanị na mba ndị otu Executive Council. Mba ndị a na-akwado naanị 20% nke mba ndị otu mana Zurab zụrụ ha kemgbe afọ 2 gara aga, ebe 80% nke mba ndị otu anabataghị ma ọ bụ obere nlebara anya.
Spain nọ na mkpọchi-ala, oke mmiri ozuzo nke mebiri obodo ahụ naanị ụbọchị 2 tupu nzukọ Executive Council, na-eme ka ọ ghara ikwe omume ka ọtụtụ ndị ozi gaa Spain.
UNWTO siri ọnwụ na nzukọ anụ ahụ na Madrid ma ghara ikwe ka ntuli aka ọ bụla ma ọ bụ nzukọ.
Dị ka oge ikpeazụ, 48-hour na mberede, e kwere ka Mịnịsta Ofesi nke Georgia nọrọ na nri abalị nri gọọmentị tupu awa ntuli aka a kpọrọ dị ka akụkụ nke usoro UNWTO. Onweghi obodo ga-acho imegide onye ozi mba ozo n’oge ahu nke na-abia ihu onye mmeri ya.
Ebe ndị ozi enweghị ike ịga njem n'ụzọ dị mfe, ndị nnọchi anya obodo na Madrid mere ntụli aka maka mba ha.
O doro anya mmadụ ole ndị minista na-ahụ maka njem nlegharị anya gosipụtara, mmadụ ole ka ndị nnọchi anya obodo ha nọchitere anya ha, na ọtụtụ ndị nnọchi anya nnọchite anya gụnyere na usoro ụnyaahụ. N'agbanyeghi na o doro anya na ọ bụ naanị mba ole na ole kpebiri maka mba ndị otu na iri ise + na ndị ga-eduga njem nleta site na nnukwu nsogbu ụlọ ọrụ chere ihu.
Onye isi odeakwụkwọ UNWTO abụọ gara aga, onye bụbu onye isi odeakwụkwọ ukwu, na onye bụbu onye isi UNWTO rịọrọ ka e mee ihe ziri ezi na ntuli aka ahụ, agbanyeghị nke a na Zurab.
Site na World Tourism Network (WTN), a Dị mma na UNWTO Election campaign malitere, na ọtụtụ narị ndị otu WTN na-anọchite anya ndị ọkachamara na-ahụ maka njem njem sitere na mba 125. Onye obula na-aza na-akwado arịrịọ maka UNWTO ka ọ hazie oge nzukọ Executive Council, na-ekwe ka ọtụtụ ndị ga-asọ mpi, ma chekwaa izi ezi nke mkpọsa ahụ. Dọkịta Walter Mzembi bịanyere aka n'akwụkwọ mkpesa a bụ onye Zurab na Taleb nyefere na 2018 ka ha rụgharịa iwu ntuli aka.
A kpaliri akwụkwọ arịrịọ a na-arịọ maka ikpe ziri ezi na ịdị mma na usoro ntuli aka na email ntuli aka, faksị, na / ma ọ bụ nyefee ya na mba 35 UNWTO Executive Council mba tupu ekeresimesi. E nyere ndị nnọchi anya US niile. Naanị otu mba zitere nkwupụta.
E nyekwara akwụkwọ arịrịọ ahụ n'isi ụlọ ọrụ UN na New York.
Nhoputa ndi ochichi a abughi nani ihe ezighi ezi, kama o mebiri Ikpụrụ Omume JIU ekwesighi ikwenye ya na nnochi nke 24 nke UNWTO General Assembly na Morocco n’aho a.
9 tozuru oke na Bahrain. O doro anya ole obodo 26 Executive Council na-atụ vootu maka Zurab mere ntụli aka ozugbo ma ọ bụ site na nnọchite nnọchite. Ọ bụrụ na onye ọ bụla anata nlebara anya n'oge Zurab nọ n'ọchịchị, ndị a bụ mba Council Council. Mba ndị a dị mma na Zurab.
Nlebara anya mmadụ ole na ole na-aga Madrid ụnyaahụ kpuchikwara anya site na nlebara anya nke otu nwoke natara, na-echefu ibu ọrụ ha ịme ntuli aka maka mba ndị ọzọ nke 150 + bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ United Nations a zuru ụwa ọnụ.
Juergen Steinmetz, onye guzobere World Tourism Network, kwuru, sị: “Nhoputa ndi ochichi abughi banyere otu Zurab tozuru oke ma obu eruo. Ọ bụghị banyere arụmọrụ ya na ọrụ ọ tụrụ anya ya n'ọdịnihu. Ọ bụ banyere ịkwụwa aka ọtọ na ụkpụrụ omume.
"Kedụ ka UNWTO ga-esi tụ anya na mba ndị dịka United States ma ọ bụ UK ga-esonye, ​​na-amata etu e si ekwe ka ụlọ ọrụ a rụọ ọrụ?"
"Ọ bụ ụbọchị nwute ọzọ maka njem nlegharị anya ụwa.
'Gloria Guevara sitere na World Travel and Tourism Council na-agba mbọ ime nke ọma iji kpọkọta ndị ọrụ nzuzo na ndị ọha na eze. Naanị WTTC ka ekwuru okwu maka nkeji 3 gbasara ọrụ nke ndị ọrụ nzuzo na nsogbu a. Na Network Njem Nleta Ụwa dị njikere ịrụ ọrụ na WTTC.
Maka m, Gloria bụ ezigbo dike n’otu otu nwanyị siri ike na ndị otu ya maara ihe ga-esi meghachi omume n’ọnọdụ a enwetụbeghị ụdị ya.
“N’oge nsogbu, e kwesịghị ịchọ ọdịmma onwe onye nanị. Anyị ahụla ebe a na US na ntuli aka onye isi ala anyị.
“N’agbanyeghi na obi di m uto na Zurab kwuputara‘ onu na mkpotu ’ya, rue ugbua, onwebebeghi mgbe obula o batara ochichi na 2018 n’ihe obula sitere na WTN ma obu eTurboNews. "
N'agha site n'ezi ohere iji zoo Zurab na ntuli aka a di mkpa, Ms. Shaikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa si Bahrain ji obi uto kelee Mr.Zurab.
Onye nnochite anya Bahrain Covid Eze Madrid Morocco Organization Spain Tourism United Nations United States World Tourism Organisation World Travel na njem nleta Council WTN Zimbabwe
3 nwụrụ, mmadụ 6 merụrụ ahụ na nnukwu mgbawa Madrid
Akuko ECPAT-USA: Iwu ahia mmadu maka ahia ulo
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke Westin Mumbai Powai Lake
Onye minista njem nlegharị anya Jamaica kwụsịrị nke mbụ na UK na Mega…
Ngwọta Mmekwa akwara Ọhụrụ
Jean-Michel Cousteau Resort Fiji na-eme ka nri ndị ọbịa na-eri nri ...
Ugbo elu ụgbọ elu Turkish ụgbọ elu na-adịgide adịgide na-ewere…
Amụma ịdọ aka ná ntị njem ọhụrụ nke Ngalaba Steeti US...
A ga-enye obodo 21 dị n'Ịtali ndụ ọhụrụ